Monk Font Ny Endrika Fanoratana Endrika - Famolavolana
Ny Endrika Fanoratana Endrika
Ny Endrika Fanoratana Endrika Ny moanina dia mitady fifandanjana eo amin'ny fisokafana sy ny fahaizan'ny serivis sans serif ary ny toetran'ny kianja sans serif. Na dia natao hooratana latinina aza tany am-boalohany dia nanapa-kevitra tany am-piandohana fa mila fifanakalozan-kevitra lehibe kokoa ny fampidirana arabo arabo. Na ny Latinina na ny Arabo no mamolavola antsika ny fanavakavahana mitovy hevitra sy ny hevitry ny géometrika iraisana. Ny tanjaky ny dingan-drafitra mitovy aminy dia ahafahan'ny roa tonta mizana firindrana sy fahasoavana mandanjalanja. Ny Arabo sy Latina dia miasa miaraka amin'ny feo tsy miangona amin'ny fikaonan-doko, ny hateviny ary ny zorony.
Anaran'ny tetikasa : Monk Font, Anaran'ny mpamorona : Paul Robb, Anaran'ny mpanjifa : Salt & Pepper.
Ity famolavolana mahatalanjona ity dia mpandresy amin'ny famolavolana volafotsy amin'ny alàlan'ny fifaninanana lamaody, akanjo ary akanjo famoronana akanjo.	Tokony ho hitanao tokoa ny volavolan'ny volavolan'ny volavolan-dàlana ho an'ny volafotsy hahitanao endrika lamaody vaovao, manavao, am-boalohany ary mamorona, akanjo sy akanjo amin'ny akanjo.
Alakamisy 16 Septambra 2021
Ny sary an-tsary sy ny famolavolana serasera
Poise Jiro Azo Ovaina Dia Jiro Asabotsy 18 Septambra
Memento Fanokafam-Taratasy Zoma 17 Septambra
Exxeo Karazana Piano Alakamisy 16 Septambra
Fanadihadihana famolavolana ny andro Asabotsy 18 Septambra
Tantara momba ny andro Zoma 17 Septambra
Famolavolana ny andro Alakamisy 16 Septambra
Mpamorona ny andro Alarobia 15 Septambra
Ekipa mpamorona ny andro Talata 14 Septambra
Ny Endrika Fanoratana Endrika Paul Robb Monk Font